Oduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddi jiru itti fufee jira |
Home Afaan Oromoo Oduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddi jiru itti fufee jira
Oduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddi jiru itti fufee jira
Note from Admin: Namni “du’a duwwaatu addaan nubaasa” jedhu, amma ammoo Abiyiin haadhe jechuun nama dhiba
~ Lammaan haga Oromoon hin tokkomne, ADP waliin tokkomuun hin taatu akkuma jedhetti jira. Haaluma kanaan, ODPn hayyoota Oromoo waliin mariin Bishooftuutti godhaa jira.
~ Marii kun ODP, keessattu Lammaa fi Abiyyii dhaamsa cimaa ni dabarsa. ODP TOKKO TA’E JABAATE BAHAA MOO NI QOODAMAA?
~ Ilaalchi Lammaa sabboontoota Oromoo biratti dhaggeettii fi deeggarsa guddaa argate. Ejjannoo sirna federaalizimii irratti inni qabu warri TPLF ni deeggara.
~ Abiyyii Ahmad karaa badii itti jirurraa duubatti deebi’aa hin jiru. Oromoon jaalattee jibbite ADWUI tokkomuu deema.
~ Akka Abiyyiitti:
~ TPLF ni ari’ama.
~ Aggaar dirijjiitiin ADWUI ni dabalamu.
~ Hanga ammatti, marii ADWUI waldoomsu irratti miseensi ODP tokkolleen hin argamne.
~ Deeggarsi Abiyyii guddaan Izeemaa fi ADP irra dhufa. Ijoolleen magaalaa yaada isaa guddoo faarsan.
~ Marii kan godhe hayyoota yunivarsitii ti: Izeemaa, ODP, ADP fi Dabuubii of keessaa qaba. Aggaar Dirijjiitiin WOMAA hin beektu.
~Marii sadarkaa waajjira MM-tti ta’e.
~ ODP waan irra beekuu hin qabu.
~ Warri leenjii kennuu kan akka Addisuu Araggaa, Leencoo Baatii fi Fikaaduu Tassamaa waan ofii isaanii beekan hin qaban.
~ Marii irratti hin hirmaanne. Qajeelfama MM kenneen daballee ODP leenjisan.
~ Maqaan dhaabaa haaraa hin murtoofne. Maqaan የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርት jedhu sobaa dha.
~ ODP ayyaana Irreecha baay’ee sodaachaa jirti.
~ Irreecha siyaasaaf itti fayyadamuuf karoora guddaatti jira.
~ Abiyyii huccuu aadaa bareedaa uffatee afaan sabboonummaa Oromoo dubbachuun Oromoo qabbaneessuuf ni carraaqa.
~ Qeerroolleen ni faarsa. Gadaallee ni faarsa.
~ Irreessi Finfinnees injifannoo ODP jedhe ni labsa.
~ ODP waliin Hegereen Oromiyaa fi Itoophiyaa cululuqa jedhe ni labsa.
~ Oduulee biraa hedduutti jira. Ammaaf kanuman sifeeffadhaa.
~ Namni dhugaa qabu yaada yaadan falma, kan dhugaa hin qabne nama arrabsa.
Manni hojii Federaalaa bakka cunqursaa fi dhiibbaamuu ilmaan Oromoo itti babal’achaa jiru. Keessattu Mana hojii Ministeeronni ODP hoganan keessatti immoo dhimmi kun ni cima. Saamichi qaarshii raawwatamu immoo abbaa kanaa kan jedhu hin jiru.
Akka fakkeenyaati qabatama jiru kaasuun yoo barbaachise Ministeera Qonnaa fi Bishaanii eeruun ni danda’ama. Hogantoonni Mannee hojii kanneen lamaa duuba duuba sabboontotaa fi namoota hojiif dhimmama qaban fakkaatu. Keessattuu Obbo Umar Huseen akka namoota kaanii Oromoo ajjesisuun komiin isa irrati ka’u jiraachuu baatullee hojii ajjeesuun maqaa Oromoo balleesisaa jira. Ministeera qonnaa keessa caasaan nafxanyootaa bara dheeraaf diriire yeroo ammaa kana immoo hidda dheereffatee saamichati jirti. Namoota Ingiliffaan maqaa isaanii ibsachuu hin dandeenye pirojektootaa irratti ramadamanii hojjechiisu. Saamicha qarshii pirojektootaa malee waan uummataaf ta’u kan hojjetan hin jiru. Warreen kun “የደብረ ዘይት እና የናዝሬት ድግስ” jechuun torbaniin Sanbata Xiqqaa fi Dilbata workshop uumuun wal yaamanii durgoo “Iqqubiif” ta’u funaannachaa oolti. Namoota Afaan Amaarignaa isaaniitii sarara lama gabaasa barreessuu hin dandeenyetu itti gaafatummaa xiqqaa hanga olaanaati qabatanii jiru. Hojiin walii galatti du’eera. Obbo Umar otoo kana arguu callisee jiraachaa jira. Hoganaa waajjira tokkoo otoo hin taane nama sirna kanatti mufateeru fakkaata? Wayita ijoolleen keenya rakkoo isa dhibee jiru haasofsiisuuf yaalan fedhii hin qabu. Hojjettoota Oromoo ijaan arguuf hin barbaadu.
Walii galatti mana hojii sadarkaa federaalaa cufa keessati haala wal fakkaataatu jira. Hojjettootiin Oromoo sadarkaa federaalaati baay’ina hin qabu. Kan jiru illee yeroo kamii caala dhiibbamee jira. Kun immoo balaa guddaa akka qabu beekamee furmaata waaraa barbaada.”
Via Oromiyaan Biyya, September 27, 2019
Boruu Barraaqaa/Yaayyaa Bashiir/ Dubbii Kijibaa ABOfi WBOn Waanuma Wallagga qofa keessa socho’uufi jiru fakkeeysee dhiyeessuun dubbii quuqqaa Oromoof qabu osoontaane ololaafi jibba ABO irraa qabu garsiisaati jira” maaliif jennaan namni keenya Wallaggaa mootummaa kanaan miidhamuun dhugaadha,waan haalamus miti.
Garuu akka waan wallaggi qofti WBO deeggaruufi WBO ta’etti Xiqqeeysanii dhiyeessuun jibbaa ofii isaa qabu garsiisuufi calaqqisuufidha.
Yaayyaa/Boruun/” Ummata Gujii, Boorana, Ilubbaaboor,Baddellee, Walloo,salaale fi Shawaa lixaa,maqaa WBOn dararamaa jiru arguu dhabeetimoo ABO fi WBO Wallagga qofatti galchee #qimmiiduun kun maal garsiisa dhiiroo?
Odeessa, Fulbaana 27, 2019
Obbo Guutuu Bifa jedhamu jiraataa Oromiyaa Lixaa ona Qondaalaati. WBO soorta jechuun RIB mana isaa guban. Hanga yoom dararaan kun itti fufa? OPDOtu gubsiisa Makkalaakeyaatummoo guba.
Previous articleየኦሮሞ ፍልስፍና: የተግባቦት ፍልስፍናዊ ዘዴ (Ilaa fi Ilaamee Philosophic Method of Philosophy), ክፍል ፻
Next articleSEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN DHAALCHIFNU!
OLANSA September 28, 2019 At 1:01 pm
OPDOn ergamtuu Wayyanee turte, Dhaaba wayyananeen akka ishif toltutti tolfate dha. Ulaagaa itti TPLF misensa OPDO ittin filattu ni beknaa ture. Ykn Gadi-galoo (the worst human being, the outcast) ta’u qabda yoo Oromoo taate. Kan dhiigan Oromoo hintaane, garuu kan Oromo kessatti guddatte, kan Oromoo lafaraa yoo duguugame dhima ishi intaane dha. Isaan akkana kuni TPLF biratti amanamoo dha. Daabaa akkanaa kana kessaa QBO misensota OPDO irraf fi jalaan ibidda itti qabsisee, gartuu hammi tokko ‘akeera lallattee’ gara QBOti luucahuu filattee. Akeera laalachuu jechun isa afaan ingliffan ” opportunist ykn go where the wind blows” jedhu dha. Garuu, QBO itti amantee natti hinfakkatu. At that critical time, the OPDO leadership has been trhowing to Oromia opulace anything that they think might stick. Finally, they found one that stick. “Gooftaan Keenya Hummata keenya, Gooftaa kan biraa hinqabnu”. The faint hearted Oromo activists and veteran QBO leaders believed the OPDO. They even did unthinkable, building the OPDO leadership image. They declared, Oromo to stop the struggle. Be silent. be quiet, they said. You are liberated. The fight is over, they declared. It shouldn’t take hard work and years for this to sink in. They said, stop stop the struggle.
Lama hinbulle, OPDOn OPDOtti deebite. Gooftaa jijjirrattee QBOtti duuluu calqabde. Gooftaan ishiin amma horachaa jirtu garuu, warraa TPLF caalaa Oromummaa diinefatee, Oromumma, Oromia fi Oromoo lafarra duguuguuf adeemu ta’ee argame. Yaa Hummata kiyyaa Oromoo, qalbeffadhaa ilaalaa. Wanti Abiy Ahmed gohaa jiru, Mallas Zenawii hingone. Wanti Afaan Abiy Ahmed kessaa bahu, Afaan Mallas Zenawii kessaa bahe hinbeku. MZ gaaf tokko QBO xiqqessee hinbeku. Oromummaa Salphisee hinbeku. Oromian haa diigamtu jedhe dubbate hinbeeku. Inumaayyuu, kan Oromia jibbu, Oromon maaf tokkomee jedhe warra jibbuu jedha ture. Yommu nafxanyaa ‘ethnic federalizm’ baduu qaba jettu, Oromoon diigamuu qaba jechu ishiti. Kana hubada. Kan Oromia jibbuu kan sirna nafxanyaa kan jaalatu qofa dha. Dhiiga keenya dhangalafne, Lafee keenya cabsine, dafqa keenya cophsinee, Sammuu keenya cuunfineet Tokkumaa har’a arginuu fi Faarsinu kana bira geenye. Gaafaa Oromummaa akka mukukkulaa fiftuu godhannee ittin adeemne, nimona. Gaaf isa irraa maqne, ni mohamna. Tokkumaa Oromoo Abbaa Bahrey jaaraa meeqa dura hubatee barresse sana qabna har’a. Tokkumaa kana, akuman asiin dura ibse, qabson argane, itichuu qabna. “qoosaa ijaa jette, ballaan” jedha Oromon yommu makmaku. Oromumaan qoosaa miti. OPDOn ittin qoosuuf eeyamuu hinqabnu.
Dhuguma OPDO kessa gartuun Oromummaan hooganamtu taa’tee ifa baatee hummatatti makamuu qabdi. OPDO kessattis fincillii godhamuu qabdi, akkuma TPLF fi OPDO adaan hiikne qabso keenyan, OPDO fi Nafxanyaa addan hiikuu qabna. Yoo didde immo walin haxaauu filanno isa dhumati. Haala hardha adeema jiru kun, bara dargii fakkachaa jira. Haala amma muldhatu kessatti, ilmaan Tigray ( TPLF) wajjin irra caalaa fedhii keenya wal-simachaa jira. OPDOn yoo of -sirreessu baate, abba feene walin qabsofnee, Oromia fi Oromummaa tiksun dirqama keenya.
Oromtichi yommuu makmaku, ” Garbittin kos Fagdi hinseenee, anis dhaaphe (dhabbadhee) kadha hinseenee “jedhe jedhama.
OLANSA September 28, 2019 At 1:14 pm
OPDOn ergamtuu Wayyanee turte, Dhaaba wayyananeen akka ishif toltutti tolfate dha. Ulaagaa itti TPLF misensa OPDO ittin filattu ni beknaa ture. Ykn Gadi-galoo (the worst human being, the outcast) ta’u qabda yoo Oromoo taate. Kan dhiigan Oromoo hintaane, garuu kan Oromo kessatti guddatte, kan Oromoo lafaraa yoo duguugame dhima ishi intaane dha. Isaan akkana kuni TPLF biratti amanamoo dha. Daabaa akkanaa kana kessaa QBO misensota OPDO irraf fi jalaan ibidda itti qabsisee, gartuu hammi tokko ‘akeera lallattee’ gara QBOti luucahuu filattee. Akeera laalachuu jechun isa afaan ingliffan ” opportunist ykn go where the wind blows” jedhu dha. Garuu, QBO itti amantee natti hinfakkatu. At that critical time, the OPDO leadership has been trhowing to Oromia populace anything that they think might stick. Finally, they found one that stick. “Gooftaan Keenya Hummata keenya, Gooftaa kan biraa hinqabnu”. The faint hearted Oromo activists and veteran QBO leaders believed the OPDO. They even did unthinkable, building the OPDO leadership image. They declared, Oromo to stop the struggle. Be silent. be quiet, they said. You are liberated. The fight is over, they declared. It shouldn’t take hard work and years for this to sink in. They said, stop stop the struggle.